Fomba telo hahazoana antoka fa misy fiatraikany lehibe ny firaketana ny efijery kely | Martech Zone
Tsy isalasalana fa nanova ny fitondran-tena mividy ny mpanjifa sy ny fanantenana ny mpivarotra mahita fomba vaovao sy tsara hidirana amin'ny Internet. Ambonin'ny fitomboan'ny fandaniana an-tserasera amin'ny taona 2020 - miakatra 44% manomboka amin'ny 2019 hatramin'ny 861 miliara dolara mahery any Etazonia - nisy fisondrotana be ny safidy fanatanterahana an-tserasera, miaraka amin'ny 80% ny mpividy manantena ny hampitombo ny fampiasan'izy ireo ny Buy-Online-Pickup-In-Store (BOPISA) ary ny pickup curbside ary ny 90% izao dia aleony mandeha an-trano noho ny fitsidihana fivarotana.
Ny mpanjifa dia matanjaka kokoa noho ny hatramin'izay raha ny amin'ny fiantsenana an-tserasera ary ity fiantsenana vaovao sy fampitomboana fampiononana ao amin'ny tontolon'ny Internet voalohany ity dia hisy vokany maharitra. Izany no antony tsy maintsy hamarinan'ny marika fa ny touchpoint rehetra dia voalohany amin'ny maso, haingana ary tsy misy tomika, na aiza na aiza misy ny mpihaino sy ny mpanjifany. Koa satria efa ho 80% ny mpampiasa finday avo lenta miantsena amin'ny findain'izy ireo izao, misy fotoana lehibe ahazoana mikarakara ny fitaovana finday kely an'ny mpanjifa.
Ny herin'ny efijery kely dia mitondra tombony vitsivitsy tsy dia kely loatra toy ny fampitomboana ny firotsahana, ny fiovam-po ary ny tsy fivadihan'ny marika maharitra. Ny marika dia tokony handinika fironana telo manokana - micro-video, microbrowser ary fanatsarana finday - hahazoana antoka fa mahatratra ny isan'ny mpanjifa an-tserasera mihombo izy ireo.
Midira amin'ny Micro-Video
Amin'ny taonan'ny TikTok sy Instagram Reels, ny mpanjifa dia mahalala ny fialamboly na fampahalalana fohy ao amin'ny findainy. Ny marika dia tokony hitrandraka an'io fironana io amin'ny alàlan'ny famoronana sary mihetsika micro-video izay misarika ny sain'ny mpijery haingana sy hampifaly azy ireo hatrany Amin'ny atiny segondra vitsy monja dia afaka mamoaka hafatra mahasarika izay mampiakatra ny fomba fijery sy ny fiovam-po ny marika.
Ny atiny mikraoba dia matetika 10-20 segondra monja ny halavany, izay midika fa manana fotoana fohy ny marika mba hahazoana antoka fa voapetraka milamina sy araka izay tratrany ny clip rehetra. Mba hahatratrarana izany dia tokony ho azo antoka aloha ny marika fa hanitsy ny atiny hamenoana ny efijery isaky ny fitaovana, na solosaina birao, tablette na finday io. Ny atiny rehetra dia tsy maintsy amboarina ihany koa ho an'ny saripika na ny fizaran-tany mba hisorohana ny haben'ny statika mety hanapaka ny firafitry ny pejy, hanodinkodinana ny sary na hampisehoana bara mainty manodidina ilay horonan-tsary. Ireo mpivarotra sy mpamorona dia afaka mampiasa ny fahaizany mianatra AI sy ny milina mba hamoronana fomba mahomby amin'ny endriny maro isaky ny horonan-tsary ilaina isaky ny haben'ny efijery, ny orientation ary ny fitaovana.
Ankoatr'izay, ny mpivarotra sy ny mpamorona dia tokony handinika tsara ny lahatsoratra mifandraika amin'ny horonan-tsary tsirairay, ao anatin'izany ny lohateny sy ny dikanteny. Ireo dia lafiny manan-danja amin'ny atiny izay manome ny sahan-kevitra ho an'ny mpijery, indrindra nanomboka 85% amin'ny atiny video jerena amin'ny Facebook dia jerena tsy misy feo. Ankoatr'izay, ny fanomezana dikanteny marina dia zava-dehibe hanarahana ny torolàlana momba ny fidirana sy ny ADA. Ny fampiasana AI dia afaka mamokatra lahatsoratra ho azy sy mampihatra dikanteny amin'ny horonan-tsary tsirairay koa.
Ampiasao ny herin'ny microbrowsers
Microbrowsers no topi-maso kely amin'ny tranonkala iray izay manaparitaka adihevitra anaty fampiharana fandefasan-kafatra manokana toa an'i Slack, WhatsApp ary Facebook Messenger. Ohatra, eritrereto ny fotoana nandefasanao ny reninao rohy iMessage ho an'ny baoty amin'ny lisitra fanirianao fitsingerenan'ny andro nahaterahana. Ny tranonkalan'ny mpivarotra dia mamorona sary ho azy kely na topi-maso amin'ny horonantsary mandeha ho azy. Izany dia manampy azy hahita ny rohy ary manangana fahatsapana voalohany tsara ho an'ny marika, mampitombo ny fahafaha-kitika sy hividianany ireo baoty ireo ho fanomezana.
Ireo rohy mikrôbrowser ireo dia manome fotoana firotsahana an-tsehatra goavana izay matetika tsy raharahain'ny marika. Ny marika dia tokony hiantoka fa ireo sary na horonantsary mialoha ireo dia aseho amin'ny fomba tsara indrindra amin'ny fampiharana amin'ny chat sy fandefasan-kafatra rehetra, ary koa ny rambony lava amin'ny efijery hafa toy ny fitaovana filalaovana tànana sy ny fitaovana marani-tsaina.
Tokony hataon'ny mpandrindra antoka fa misy rohy mivelatra ao anaty microbrowsers avy amin'i:
Fanamarihana ny zava-drehetra manerana ny mari-pamantarana HTML, ary ferana ny lohateny amin'ny teny 10 sy ny famaritana amin'ny litera 240
Ampiasao hatrany ny Open Graph ho marika hanamarihana ireo microbrowser samihafa
Fisafidianana sary tsy voafaritra manokana izay manintona ny maso ary manery ny handray azy handika vaovao bebe kokoa
Mampiasà "nanostories" horonan-tsary fohy ho an'ireo microbrowser vitsivitsy izay mampiseho horonan-tsary ankehitriny
Amin'ny fanarahana ireo torohevitra ireo, ny marika dia afaka mampiasa ny atiny lehibe indrindra amin'ny microbrowser azy ireo ary mitondra ny tolo-kevitr'ireo mpiara-mianatra izay mitarika tsindry sy varotra. Ho fanampin'izany, azon'izy ireo ampiasaina ny angon-drakitra mba hanomezana hevi-baovao momba ny lamin'ny mpihaino sy ny safidiny, ary koa ny habetsaky ny fifamoivoizana azo avy amin'ny fanondroan'ny namana, na ny “social social.” Ity fifamoivoizana microbrowser ankolaka ity dia fotoana mety ho an'ny mpivarotra - arakaraka ny habetsaky ny angona ananany momba ny fizarana ny rohy amin'ny alàlan'ny fizarana manokana sy ny fifanakalozan-kevitra ataon'ny vondrona no ahafahan'izy ireo manamafy ny atiny sy ny herin'ny referral.
Ataovy namana-tranonkala ilay tranonkala
Rehefa miantehitra bebe kokoa amin'ny fiantsenana an-tserasera ny mpanjifa, nanjary zava-dehibe kokoa ho an'ny marika ny manolotra atiny tranokala manankarena izay mavesatra be amin'ny fitaovana finday. Ny mpanjifa dia mitady traikefa mahasarika sy milamina izay haingana sy mamaly. Tsy hiandry ny pejy iray akory izy ireo. Raha ny marina, ny fahatarana iray segondra amin'ny valin'ny pejy dia mety hiteraka a Fihenan'ny 16 isan-jato amin'ny fahafaham-pon'ny mpanjifa.
Ny marika dia tokony hifantoka amin'ny kalitao, ny endrika ary ny haben'ny fananany nomerika hanatanterahana ireo antenaina ireo. Ho an'ny sary, ny mpamorona dia tokony hanova ny haben'ny sary ho an'ny refin'ny famaritana manokana, manitsy ny haben'ny votoatiny, ny vahaolana ary ny fisehony mba hifanaraka amin'ny tontolon'ny fampiharana. Mihatra amin'ny horonan-tsary ihany ny fenitra mitovy amin'izany, ary koa mandray ny kalitaon'ny horonantsary handraisana fepetra amin'ny tamba-jotra ho an'ny mpampiasa. Amin'ny alàlan'ny fanaovana ny tranonkala ho sariaka finday, ny marika dia afaka matoky fa hankafy ny traikefa fiantsenana an-tserasera tsy misy friksiôna izay mitarika fifamoivoizana sy varotra ny mpampiasa.
Ny valiny lehibe dia avy amin'ny antsipiriany kely
Nanjary zava-dehibe kokoa ho an'ny marika ny mijery tsara ny paikadin'ny efijery kely ary manome antoka fa mikarakara ireo mpampiasa finday izy ireo. Ny fampidirana fanao tsara indrindra amin'ny micro-video, microbrowser, ary ny fanatsarana finday dia lakilen'ny fanatanterahana ny andrasan'ny mpanjifa an-tserasera ankehitriny sy ny fahazoana vokatra lehibe eo amin'ny tontolon'ny finday.
Tags: ny videofacebook messengerInstagram Reelsmpizaha mikraobahoronantsary microhoronantsary micro-videomicrobrowsersfifandraisan'ny findayfanatsarana findayhafainganam-pandehan'ny pejy findaymamaly ny findayhafainganam-pandeha findayLahatsary findayfinday-friendlypage speedmanaikyvideo fohyhiahotrahoranareoefijery kelyTikTokendrika videofandaharana horonan-tsaryhaben'ny horonantsaryWhatsApp